Nhoroondo yeBlockchain - Cazoo
musha » musha » Nhoroondo yeBlockchain
Tag: Merkle miti, Blockchain, Dapps, Ethereum Virtual Mashini (EVM), Hal Finney, Hashcash, Uchapupu hwebasa, Reusable Hufakazi hweKushanda, RPoW, Satoshi Nakamoto, Scott Stornetta, Mikangano Yema Smart, Stuart Haber, Vitalik Buterin, Wakefield Scott Moller Stornetta
Iyo tekinoroji inosimbisa iyo cryptocurrency nyika ndiyo inozivikanwa pasirese blockchain.
Iyo blockchain inobvumira mushandisi wega wega pane network kusvika pakubvumirana pasina hazvo kufanira kuvimbana. Zvinoita kunge zvakanaka kutaura izvo nhoroondo ye blockchain iri, muchidimbu.
Uchapupu hweBasa hunogona kushandiswazve
Pfungwa iri kumashure kwe blockchain tekinoroji yakatsanangurwa senge kumashure sa1991, apo vaongorori Stuart Haber naW. Scott Stornetta vakaunza mhinduro inoshanda yemakomputa ekumaka magwaro edigital kuitira kuti varege kudzoserwa kumashure kana kukanganiswa.
Stuart Haber naW. Scott Stornetta
Sisitimu yakashandiswa keteni yakachengetedzwa yakachengetedzwa kuchengeta magwaro akanyorwa ne timestamp uye yatove muna 1992 chirongwa ichi chakagadziridzwa neMerkle miti, ichiita kuti ibudirire uye ichikubvumidza iwe kutora magwaro akawanda mune imwechete block. Kunyangwe izvi zvevaongorori vaviri zvaive basa rakakura, tekinoroji iyi yakaramba isingashandiswe uye patent yakapera muna 2004, makore mana pamberi pokuberekwa kweBitcoin.
Muna 2004, musayendisiti wemakomputa uye mumiriri we crypto Hal Finney (Harold Thomas Finney II) akatanga chirongwa chinonzi RPoW, Reusable Proof Of Work. Iyo sisitimu yakashanda nekutambira isingachinjiki chiratidzo kana isina-fungible Hashcash-yakavakirwa "humbowo hwebasa" uye mukudzoka yakagadzira RSA yakasainwa chiratidzo iyo inogona kutamisirwa kubva kumunhu kuenda kumunhu.
RPoW yakagadzirisa iyo mbiri yekushandisa dambudziko nekuchengeta muridzi wemasaini akanyoreswa pane yakavimbika server, yakagadzirirwa kubvumira vashandisi kutenderera pasirese kuti vaone kururamisa kwayo nekuvimbika munguva chaiyo.
Tinogona kufunga nezve RPoW semuenzaniso wekutanga uye yakakosha nhanho yekutanga munhoroondo ye cryptocurrencies.
Pakupera kwa2008, imwe yakaburitswa whitepaper, bepa rekutsvagisa, iro rakaunza peer-to-peer decentralized yemagetsi system system - inonzi Bitcoin. Yakatumirwa kune encryption tsamba yekutumira nemunhu kana neboka vachishandisa ma alias e Satoshi Nakamoto.
Iyi purojekiti yaive yakavakirwa paChipupuriro chebasa Hashcash algorithm, asi pane kushandisa computational Hardware simba senge RPoW, Bitcoin yakapetwa kaviri yekudzivirira yakapihwa neyakaremerwa peer-to-peer protocol kuteedzera uye kuongorora zviitiko. Mumashoko akareruka, Bitcoins "anocherwa" kuti awane mubairo uchishandisa chiratidzo-che-chebasa mashandiro emunhu mumwe mugodhi uyezve inosimbiswa nenodhi decentralized network.
Bitcoin akaberekwa muna Ndira 3, 2009.
Chikamu chekutanga cheBitcoin chakacherwa naSatoshi Nakamoto, nemubairo we50 Bitcoins. Wokutanga Bitcoin mugashiri aive Hal Finney, uyo akagamuchira gumi Bitcoins kubva kuna Satoshi Nakamoto mune yekutanga Bitcoin transaction muna Ndira 10, 12.
Mu 2013, Vitalik Buterin, programmer uye co-muvambi wemagazini yeBitcoin, akataura kuti Bitcoin yainyanya kuda a mutauro wekunyora (kukodha, kuvaka kodhi) kuvaka decentralized kunyorera. Kukundikana kuwana kubvumirana munharaunda, Vitalik akatanga kuvandudza nyowani blockchain-yakavakirwa kugovera komputa chikuva, ndokuitumidza kuti Ethereum. Sezvaakavimbisa, iyi netiweki nyowani yaive nechinyorwa mukati mayo inonzi Mikangano Yema Smart.
Smart Zvibvumirano zvirongwa kana zvinyorwa zvinogoverwa nekuitwa paEthereum blockchain, uye inogona kushandiswa kuita mutengano kana mamwe mamiriro akasangana. Zvibvumirano zvine hungwaru zvakanyorwa mune yakatarwa mitauro yekuronga uye zvakanyorwa mu bytecode, iyo yakasarudzika Turing-yakazara (kana Turing-yakaenzana) chaiyo muchina unonzi iyo Ethereum Virtual Machine (EVM) inogona kuverenga nekuita.
Vagadziri, iyo inorova moyo yeiyi blockchain, zvakare vanokwanisa kugadzira uye kushambadzira mafomu anomhanya mukati meEthereum blockchain. Izvi zvinoshandiswa zvinowanzodaidzwa DApps (decentralized application) uye inogona kuve neakasiyana mafomu kubva kune mumwe nemumwe, kungofanana nemaapps ari pafoni yedu: social media application, kubhejera kunyorera uye kushandiswa kwemari kuchinjisa.
Ethereum's cryptocurrency inonzi Ether (ETH). Inogona kutamisirwa pakati pemaakaunzi uye inoshandiswa kubhadhara makomisheni esimba remagetsi rinoshandiswa pakuita zvibvumirano zvakangwara.
Blockchain tekinoroji iri kuwedzera pakati pekucherechedzwa, iri kukwezva kutarisisa kwakawanda muvazhinji, uye iri kutoshandiswa mukushandisa kwakasiyana siyana, kusingogumiri kuma cryptocurrencies.
Nyaya inoteveraZvinorevei kumigodhi cryptocurrencies uye mashandiro emigodhi anoshanda
Chii chinonzi Ethereum?
Zvinorevei kumigodhi cryptocurrencies uye mashandiro emigodhi anoshanda